बच्चाको जन्मको लागि उज्यालो र सबै भन्दा राम्रो उपहारहरू मध्ये एक राम्रो प्यासिफायर हुन सक्छ। यद्यपि जवान आमाबाबुले उद्देश्यको लागि यस्ता सहायक उपकरण प्रयोग गर्न निर्णय गर्दछन्, तपाईले निश्चित रूपमा उनीहरूलाई हँसिलो र अपमानजनक रमाइलो दिन सक्नुहुन्छ।
बच्चाहरु को लागि राम्रो निपल के हो?
वास्तवमा, उत्पादकहरूको कल्पनाको उडान यति असीमित छ कि बच्चाहरु को राम्रो निपल बिल्कुल कुनै पनि हुन सक्छ। मनपर्ने विषय जो प्रायः यस्तै सामानहरूको डिजाइनमा अवस्थित हुन्छ, मानिसको मूंछ, साथै विशाल दाँतका साथ वयस्कको मुख हुन्छ।
भविष्यका सुन्दर महिलाहरु को लागि प्राय: प्रायः उत्कृष्ट प्यासिफायरहरु - प्यासिफायरहरु लाई उज्ज्वल रातो रङहरु , महिला चुरोट को चित्रण गर्दछ, एक चुम्बन को लागी। एक धेरै लोकप्रिय विकल्प सुँगुर सुँगुर को रूप मा एक डमी पनि छ, जो केटाहरु र केटीहरु को लागि एकदम सही छ।
तपाईलाई नव-निर्मित अभिभावकहरूमा कस्तो प्रभाव पर्दछ, तपाइँ अन्य मोडेलहरू खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसोभए बच्चाहरु को लागि केहि शांत निपल्सहरु को उत्कृष्ट शैली मा बनाइन्छ र त्यो उत्सव को अन्य प्रतिभागियों को डराने को लागी डिजाइन गरिएको छ। यी फरक पिशाच मोटाईहरू, खोपहरू, विशाल मकड़ीहरू र यति छ। यस्ता उपहारहरूसँग सावधान रहनुहोस्, त्यसैले युवा परिवारसँग सम्बन्ध बिग्रेको छैन।
अन्तमा, केही निपलहरूले मजाक र मजेदार शिलालेखहरू चित्रण गर्छन्, यद्यपि उनीहरू आफैलाई पूर्ण स्तर देख्न सक्छन्।
ठुलो निपल्स कहाँ छ?
आज यस प्रकारका सामानहरू किन्नुहोस् विभिन्न पसलहरू र बजारहरूमा, साथै इन्टरनेट मार्फत सबै प्रकारका डिलीवरी सेवाहरूको सहयोगको साथ। धेरै सावधान रहनुहोस्, किनकि यदि यस्तो उपकरणमा कम्तिमा एक-पटक यसको उद्देश्य उद्देश्यको लागि समावेश छ, यो बाँझ हुनुपर्छ र गुणस्तरको सामग्री हुनुपर्छ, र एक ओर्थोडन्टिक आकार पनि छ ।
यही कारणले तपाइँ विश्वसनीय बिक्रेताहरूबाट मात्र ठुलो निपलहरू खरीद गर्न सक्नुहुन्छ।
नयाँ जन्मेको खानाको लागि कुन बोतल राम्रो छ?
नवजातिका लागि कारवाही-ट्रांसफर
नवजातको लागि ग्लस्टाने
जुत्ताहरूको लागि घुमक्कड TPK
बच्चाहरु मा स्ट्रबाइज्मसस - बालिका स्ट्रैबिस्मस को सबै रूपहरु को कारण र उपचार
नवजातिका लागि सहायक उपकरणहरू
समयमै बच्चाहरु प्रयोग गर्दै
मैले कति महिनामा बच्चा राख्न सक्छु?
बाल मोड 1 वर्ष सम्म
जब मिश्रित फिडको साथ पूरक खाना खुवाउने?
के छल्लेहरू संग सिङ्गो - निर्देशन
पतनमा नयाँ नवजात कस्तो बनाउने?
12 यात्रा गर्ने उत्तम तरिका
तरकारीले के जस्तो देखिन्छ?
बी भोजन मा भिटामिन
पालक - उपयोगी गुणहरू
बिल्लियों को लागि शौचालय
लिन्डसे लोहान र युगोर टराबासोवले मरुशसका सफारी पार्कमा आफ्नो भावना लुकाएनन्
घरको म्याच कसरी बनाउने?
अल्ट्रासाउन्डको यी 13 डरलाग्दो दृश्यहरू तपाईंलाई बच्चाहरू गर्न चाहने चाहन्छन्
शरद ऋतु 2013
यो पुन: ल्याबुलन ले तपाईंलाई बिना हल्ला बिना जाने दिनेछैन!
Pärnu - पर्यटक आकर्षण
Gooseberries - उपयोगी गुणहरू
आधुनिक समाजको मनोवैज्ञानिक समस्याहरू - कारणहरू र परिणामहरू
गर्भावस्थाको हप्तामा भ्रूण वृद्धि
तपाईं कसरी बिरालो फोन गर्नुहुन्छ?
कर्करको फसल कसरी बढाउने?
ब्राडली कूपर र जेनिफर लरेन्स
फ्राइङ प्यानमा फ्रान्सेली मा मासु
Google को बारे मा 25 दिलचस्प तथ्यहरु, जुन तपाइँ निश्चित रूप देखि चाहेंगे